Ny Semalt dia mamoaka ny tondrozotra CTA Buttons
Rehefa manao e-varotra, manatsara ny votoatin'ny tranonkala ho tsaraNy fijerena mozika fikarohana dia singa manan-danja. Orinasa marobe no nahomby tamin'ny alalan'ny fampiasana ny SEO sy ny digital hafatetik'asa ara-barotra. Ireo hevi-dehibe toy ny fisafidianana sy ny fanamafisam-peo dia manan-danja amin'ny famaritana ny fomba fitondran'ny pejy Internetamin'ny SERPs. Taorian'ny fanavaozana ny algorithm tamin'ny 2017, dia ny votoatin'ny Google no manome lanjany amin'izao fotoana izaony maha-zava-dehibe, ny namana akaiky, ary ny traikefa amin'ny mpampiasa.
Amin'ny traikefa ananan'ny mpampiasa, Max Bell, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success of Semalt Digital Services, dia manoro izao manaraka izao:
Ny tranonkala izay mahasalama ny mason'ny mpampiasa.
Fialan-tsasatra (amin'ny hevitra fototra) - grain loss sensor.
Content izay manan-danja amin'ny tanjon'ny mpampiasa na ilaina.
Araka ireo antony ireo, ny traikefa amin'ny fampiasana tranokala dia tokony ho ny fanalahidyfiahiana amin'ny fampivoarana tranonkala. Vokatr'izany, ny tetikasa CTA dia mila filàna lehibe hijerena izay toerana hametrahana bokotra lehibe. Faohatra, ny bokotra an-tsehatra. Ity bokotra ity dia manosika mpitsidika iray hanao ny asa lehibe ao amin'ny pejy Internet toy ny mividy, manoratrana download. Azonao ampiasaina ireo toro-hevitra etsy ambany mba hahatonga ny fianarana CTA ho asa mora:
1. Ny vala
Tokony hifanaraka amin'ny famolavolan'ny tranonkala ny fandefasana ny CTA. Ny UX dia tokonyMijanona ho toy ny aesthetic araka izay azo atao amin'ny bokotra CTA..Ny tetikasa sasantsasany dia mety hanampy amin'ny fametrahana ny bokotra eo ambonin'ny vala sy ny hafa etsy ambany. Amin'ny hafaIreo tranga, pejy lava lava dia ahitana CTA ao amin'ny ampahany ambony sy ambany amin'ny pejy. Pejy web-drakan-dàlana tsy dia misy toerana voafetra honenanabokotra fihetsika.
2. Tranokala sy tranonkala finday
Araka ny fanavaozana ny volana Janoary, Google dia handoa bebe kokoany fahatsaram-pon'ny tranonkala iray. Rehefa manao SEO, dia misy endri-tsafidy sasany azonao ampiasaina amin'ny fitaovana finday fa tsyon a desktop. Ohatra, ny halavan'ny votoaty. Araka ny fikarohana, maro ireo biraon'ny mpampiasa azy no tia bokotra CTA. Ao amin'nyNy fianarana ihany, ny olona dia mahita fa mora ny manatanteraka hetsika CTA eo amin'ny fitaovana finday, indrindra raha eo an-tampon'ilay pejy ny bokotra CTA.
3. Ankavia na ankavanana
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra (raha tsy ny rehetra), ny bokotra manasa-action dia manompo ireo mpanjifaraha amin'ny lafiny tsara amin'ny pejy Internet. Araka ny tarehin'ny maso, ny mpisera iray dia milaza mpividy iray, dia hikorisa pejy iray amin'ny farany na ambony ambonyzorony. Ity endrika ity dia manosika ny olona hanao fampivoarana tranonkala. Ny smartphones dia manana endri-pananganana teratany amin'ny fametrahana menus amin'ny ankavia, izay mamelaho an'ny toerana fanalahidin'ny ankavanana.
Rehefa manao e-varotra, endritsoratra miavaka amin'ny SEO sy ny bokotra webNy toerana misy ny toerana dia mitana toerana lehibe. Ny tranonkala tsara dia tokony afaka manova ny mpitsidika ho mpividy iray amin'ny alalan'ny sehatra manan-danja ao amin'ilay tranonkala. Rehefa ampitsidika manindry ny rohinao, dingana iray AIDA (Attention - Interest - Desire - Action). Ity dingana ity dia tokony hitarika anao amin'ny toerana misy anaomametraka ireo bokotra ilaina toy ny bokotra Call-To-Action. Ny tontolon'ny CTA dia afaka mibodo toerana miavaka ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Ireo toerana ireodia ahitana faritra toy ny ao amin'ny pejy na toerana mety ho an'ny mpampiasa finday. Ny interface iray izay tsy mety dia mety hahatonga anao ho sarobidyfifamoivoizana, manimba ny ezaka SEO anao. Amin'ny fampiasana ireo toro-hevitra fitsaboana CTA ireo dia afaka mihamaro ny fivoaranao.